के ईसेवा ह्याक भएकै हो ? कम्पनी भन्छ, यो केवल ‘फिशिङ स्टन्ट’ हो – Esewanews
Home / Headline / के ईसेवा ह्याक भएकै हो ? कम्पनी भन्छ, यो केवल ‘फिशिङ स्टन्ट’ हो
Shivaram Khadka Headline, अर्थ, समाचार Leaveacomment 13824 Views
पासवर्ड परिवर्तनका लागि ईसेवामा रजिस्टर गरिएको मोबाइलमा एसएमएस वा ईमेलमा प्राप्त टोकन राख्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । कम्पनीले सूचना जारी गरेको केही बेरमै ट्वीटरमा भर्खरै खुलेको एउटा आईडीबाट ईसेवाको डेटा ब्रिच प्रमाणीत गर्ने उद्देश्य अनुरुप ट्वीटहरु आउन थाले । ईसेवाको यस्तो सूचना र ट्वीटको विवरण देख्ने वित्तिकै थुप्रै प्रयोगकर्तामा ईसेवा साइबर आक्रमणमा परेको निश्कर्ष निकाल्न थाले । ईसेवाले सूचना जारी गरेको एक घण्टा लगत्तै ट्वीटरमा ‘अपरिचित’ नामबाट एउटा अकाउन्ट खुलेको छ । जसबाट यो समाचार तयार पार्दा सम्म केवल दुई वटा ट्वीट मात्र गरिएका छन् । ३४ जना प्रयोगकर्ताको ईमेल आईडी, पासवर्डका सुरुवाती अक्षर र ईसेवा वालेटमा रहेको रकम सहितको स्क्रिनशट उक्त ट्वीटसँगै पोस्ट गरिएको छ । जसमा सबै प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न लगाउनु सकारात्मक कदम भएको बताइएको छ । ट्वीटमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो सबै गर्न ढिलो भइसकेको भन्ने लाग्दैन ? बरु वेब लगईन गर्नु अघि ओटीपी प्रयोग गर्नुहोस् ।’
ईसेवाले ब्राउजरमा पासवर्ड इन्टर गर्दाकै समयमा इन्क्रिप्ट हुने बताएको छ । कम्पनीको सुरुवाती समयदेखि नै पासवर्ड इन्क्रिप्ट रुपमा राख्ने गरिएको लामिछानेको भनाई छ । ‘यो स्क्रिनशट फिसिङ गर्नेले नै युजर नेम र पासवर्डको लिस्ट बनाएर बाहिर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘ईसेवाको सिस्टमबाट कुनै प्रयोगकर्ताको डेटा लिक नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’ source: techpana
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:०३